.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဆိုတေး မင်္ဂလာပါ(2014)[Album]
ဆိုတေး ရဲ့ မင်္ဂလာပါ(2014)[Album]ပါ။
လိုင်းမကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဒေါင်းရအဆင်ပြေရန် မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)ဆိုက်ကဒေါင်းယူပြီး
ဆိုဒ်ချုံ့ပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ၊ အောက်မှာလိုင်းပေါ်မှာနားဆင်လို့ရော ဒေါင်းယူလို့ပါရပါတယ်။
1 မင်္ဂလာပါ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
2 အဖြူရောင်အချစ် ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
3 ပြန်လာခဲ့ပါ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
4 I Love You ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
5 အသစ်ကပြန်စချင်တယ် ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
6 မင်းတစ်ယောက်သာ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
7 ပျော်သလိုနေတတ်တဲ့သူ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
8 ရင်ခုန်လိုက်တိုင်း ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
9 ရေမြေခြား (feat. ဖြိုးAက) ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
10 ယုံပါချစ်သူ့ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
11 သွားခေါလေး ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
12 ရည်းစား ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
12 အသစ်တွေ့ခဲ့ရင် ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
Posted by FlashSongCrazy at 09:36